१ लाखभन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्दै, कति पाउँछन् तलब ? — Sanchar Kendra
१ लाखभन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुल्दै, कति पाउँछन् तलब ?
काठमाडौँ। स्थानीय चुनावको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी पनि राखिने भएको छ। देशैभर एकैपटक हुने चुनावमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले मात्रै अपुग हुने भएपछि म्यादी प्रहरी पनि राख्ने तयारी गरिएको छ।
एक लाखभन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै म्यादी प्रहरी भर्ना लिने तयारी गरेको छ। विगतका चुनावमा पनि म्यादी प्रहरी राखिएका थिए।
यसपालि करिब एक महिनाका लागि म्यादी प्रहरी राखिनेछन्। म्यादी प्रहरीले २४ हजार तलब पाउँछन् भने पोशाक भत्ता पाँच हजार र खाजा सुविधा पाउने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
म्यादी प्रहरीलाई जवान सरह सेवा, सुविधा दिने तयारी छ। म्यादी प्रहरी छनौट गरेपछि करिब १० दिन प्रशिक्षण दिने तयारी छ। सरकारले ०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ।
स्थानीय चुनावमा भाग लिन ८० दलले दर्ता निवेदन दिइसकेका छन्। चुनावअघि सबै जनतालाई कोरोना खोप लगाइसकेको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई आयोगले आग्रह गरिसकेको छ।